globalpressonline » Daawo Sawirro Weeraro gaari iyo Toorey loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada London
Daawo Sawirro Weeraro gaari iyo Toorey loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada London
Mar 22, 2017 - Comments off
London. Waxaa soo baxaya faahfaahino hordhac ah oo ku saabsan weeraro ka dhacay goor dhow magalada London ee dalka Britain kuwaasoo loo adeegsaday Toorey iyo gaari dad la jiirsiyey. Askari booliis ah ayaa lagu tooriyeeyay dhismaha baarlamaanka ee magaalada London. Qofkii weerarkaas lagu eedeeyay waxaa toogtay booliis hubaysan Wararka kalena waxay sheegayaan in gaari si ula kac ah loo jiirsiiyay ugu yaraan afar ruux oo marayay buundada Westminster.
Gawaarida gurmadka degdegga ah ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay. Waxaa jira warar sheegaya in rasaas laga maqlay dibedda baarlamaanka UK. Wararka ayaa sheegaya in dhismaha baarlamaanka ee Westminster gebi ahanatiisba la xiray. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dad dhaawacmay oo gargaar deg deg ah lagu siinayo goobta.
Waaxda maamusha gaadiidka dadweynaha London ayaa sheegtay in boolisku uu ka dalbaday in la xiro boosteejada tareenka laga raaco ee ku taalla agagaarka dhismaha Westminster. Ra’isal wasaaraha Britain Theresa May, ayaa loo sii qaaday goob ammaan ah markii rasaasta la maqlay. Ra’isal wasaaraha Britain Theresa May, ayaa loo sii qaaday goob ammaan ah markii rasaasta la maqlay.